Khilaaf weyn oo soo kala dhexgalay Maamulka Ahlusunna iyo Madexweyne Farmaajo iyo Ahlusunna oo digaalki Xeraale ku eedaysay in Dowlada qayb ka aheed. – Kismaayo24 News Agency Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
Khilaaf weyn oo soo kala dhexgalay Maamulka Ahlusunna iyo Madexweyne Farmaajo iyo Ahlusunna oo digaalki Xeraale ku eedaysay in Dowlada qayb ka aheed.
Arimaha Bulshada Breaking News English News Kaydka Wararka Xulka ah Somali News Top News Xulashada K24 XULASHADA TODOBAADKA
by nairobi 22nd July 2017 0165
Warar naga soo gaaraaya Villa Soomaaliya ayaa tibaaxaaya in khilaaf xoogan uu soo kala dhexgalay Maamulka Farmaajo iyo Kuwa Ahlusunna ee ka arrimiya Gobaladda Dhexe ee Dalka Soomaaliya.
Xiriir ka Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxda Ahlusunna oo horay u ahaa mid fiican ayaa bilihii udanbeeyay soo xumaanaayay kadib markii Ahlu Sunna ku eedaysay madaxweyne Farmaajo in oo fulin waayay heshiis ay horay ugaleen.
Kilaafkaan ayaa sii xoogaystay kadib markii ay ciidamada Nabad sugida ee Soomaaliya ee NISSA oo fadhigoodu yahay Dowlad Gobaleedka Galmudug ay si toos ah ooga qayb qaateen Dadaalkii Dadka badan ku dhinteen ee ka dhacay Magaalada Xeraale ee Gobalka Galguduud.
Wada hadal dhanka telephone ka ah ee dhex maray madaxweyne Farmaajo iyo Madexweynaha Maamul Gobaleedka Gobalada Dhexe/Ahlusunna ayaa ku dhamaaday natijo la,aan kadib markii Ahlusunna ku eedeysay Farmaajo in uu maray wadadii Dowladii Xasan Sheikh, asagoo kabaxay balan ay horay uwada digteen.
Hada ka hor ayay aheed markii ay digaala noocaan oo kala ah ka dhaceen Degmooyinka Caabudwaaq, Guriceel iyo Dhuusamareeb kuwaas oo Maamul Gobaladda dhaxe ee Ahlusunna ay ku eedeeyeen Dowladii waqtigaa jirtay.
Maamulka Gobalada dhaxe ee Ahlusunna ayaa sidookale Farmaajo ku eedaysay in uu gacanta u galay ururka Al-ictisaam oo horay loo oran jidhay Al-ixitixaad Al-islami kaas oo xurguf dhanka mabaadiida ah kala dhaxayso Ahlusunna
Madaxweyne Farmaajo ayaa ka dalbaday maamulka Ahlusunna in ay wada hadlaan wixii khilaaf iyo tabasha ahna hoos loo dhameeyo.
Farmaajo oo baaq deg deg ah ka soo saaray dagaal beeleedka ka socda deegaanka Xeeraale ee Gobolka Gal-guduud.
Maamulka Degmada Cabdi Biroole oo siminaar lagu baranayo Maamul Wanaagga looga furay Kismaayo
Rasaas xoogan oo lagu furay Gaari ay la socdeen Dad Shacab ah yaase laayay shacabka.?…..
admin 22nd December 2016
Wasaaradda Arrimaha gudaha oo furtay shir looga tashanayo sharciyada xisbiyada siyaasadeed “SAWIRRO”
admin 21st November 2015 21st November 2015
Diyaarado aan La aqoon oo Duqeyn ka geestay Saldhig ay Alshabaab ku leeyihiin Deegaanka…. ee Gobolka…..
Tifaftiraha K24 5th September 2016